3. Magaca garoonka diyaaradaha wuxuu noqon doonaa garoonka diyaaradaha Recep Tayyip Erdoğan! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 Istanbul3. Magaaladda garoonka diyaaradaha ayaa noqon doonta Recep Tayyip Erdoğan Airport!
3. Magaaladda garoonka diyaaradaha ayaa noqon doonta Recep Tayyip Erdoğan Airport!
21 / 09 / 2017 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
3 weli waa dhismaha. Waxaa jira fikrado badan oo kala duwan oo ku saabsan magaca garoonka. Gaar ahaan, ilaa iyo inta shaqadu socoto si aad u eegto jawaabo badan oo su'aal ah. mashaariicda fuliyay garoonka saddexaad ee Istanbul sida ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee dalka Turkiga ayaa sidoo kale mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee Yurub.
3 weli waa dhismaha. Waxaa jira fikrado badan oo kala duwan oo ku saabsan magaca garoonka. Gaar ahaan, ilaa iyo inta shaqadu socoto si aad u eegto jawaabo badan oo su'aal ah. mashaariicda fuliyay garoonka saddexaad ee Istanbul sida ka mid ah mashaariicda ugu waaweyn ee dalka Turkiga ayaa sidoo kale mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee Yurub. Shaqooyinka madaarka, oo soo jiidanaya faahfaahinta faahfaahin badan oo kala duwan, ayaa weli socda. Marka la dhammeeyo madaarka, oo hadda dhismaha ku jira dhinaca Yurub, waxaa lagu xisaabiyaa 2018, 26 waxaa la bilaabi doonaa Febraayo 2018.
3 ka dib jawaabo raadinta su'aalo badan oo ku saabsan garoonka diyaaradaha. magaca garoonka diyaaradaha ayaa sidoo kale la go'aamiyay. In kasta oo magacyo badan oo kala duwan loo soo gudbiyey, wasiirka gaadiidka, arrimaha badda iyo isgaadhsiinta Lütfi Elvan ayaa jawaabta su'aalaha ku saabsan magaca ku sharaxay. 12. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, magaca eedeymaha ay sameeyeen 3. ayaa sheegay in magaca garoonka diyaaradaha loo qoondeeyn doono garoonka diyaaradaha ee Recep Tayyip Erdogan. Sidan, dhibaatooyin badan oo kala duwan oo ka dhacaya madaxa ayaa bixiyay jawaabaha. Magaca madaarka saddexaad, oo wali dhismaha lagu dhisayo, ayaa lagu magacaabi doonaa Recep Tayyip Erdogan Airport.
Magaaladda garoonka diyaaradaha ayaa noqon doonta Recep Tayyip Erdoğan Airport!
3 ayaa si aad ah loo filayaa. Waa maxay magaca garoonka? Lutfi Elvan, oo ka jawaabay su'aasha, ayaa ku dhawaaqay in magaca garoonka loo go'aamin doono Garoonka Recep Tayyip Erdogan. Sidan, mid ka mid ah arrimaha la filayo ee la xidhiidha maddaarka ayaa la caddeeyey. Waxaa jira su'aalo ku saabsan arrimo badan oo kala duwan oo ku saabsan madaarka, kaas oo hadda socda iyo qorsheynaya in lagu furo 2018. 12. Waxaa la sheegay in maddaarka, oo la qorsheynayo in loo magacaabo ka dib madaxweynaha, waa meel ay Istanbul ku sahlan tahay in la helo.
HALKAN HALKAN KU JIRA 3
Nissibi Bridge waxaa loo magacaabay Recep Tayyip Erdogan Bridge
Raysal Wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa subaxnimadii Talaadadii ku geeriyooday Tuulada Kadikoy-Kartal
IZBAN iyo Recep Tayyip Erdogan
Ra'iisul-wasaare Recep Tayyip Erdogan ayaa furay Iskuxirka Eskisehir Konya High Speed ​​Line
Wuxuu ka shaqeeyaa Recep Tayyip Erdoğan Boulevard
Ogeysiiska Qaanuunka: Qeyb ka mid ah Dib u eegista Qeybaha Laba iyo Afarta Axdo ee Xirmooyinka iyo Qeybta V0H Dayactirka…
Ra'iisul Wasaaraha Tayyip Erdoğan: Mashruucyada Gaadiidka Socdaalka
Magaca Airportka Magaaladda Cusub ee Istanbul
Recep Altepe wuxuu ku dhawaaqay: Bartamaha wadada Mudanya waxaa loo habeyn doonaa gaadiidka dadweynaha, metrobus…
3. Waa maxay magaca garoonka?
3. Magaca garoonka diyaar ma noqon doono sahan
3. Magaca garoonka waxaa lagu dhawaaqay
3. Magaca Garoonka
Ogeysiiska Qandaraaska: Maqasyada ayaa la gadan doonaa
Eskişehir OSB waxay ku casumeysaa maalgelinta shirkadda Greenbrier US